🥇 ▷ Realme 5 iyo Realme 5 Pro: muuqaalada iyo qiimaha ✅
Realme 5 iyo Realme 5 Pro: muuqaalada iyo qiimaha
Runtii wuu yimid inuu sii joogo. Summada Shiinaha ayaa sameysanaya ilko iyagoon wax dan ah ka qabin tartamada oo dhan. Sidee? Bixinta wax intaa ka yar Kaliya markaa ayaan sharxi karnaa telefoonnada casriga ee shirkadda, Realme 5 iyo Realme 5 Pro, kuwaas oo u taagan dadaalkooda weyn ee kaamirooyinka, qaraar gaaraya 48 Xildhibaan Nooca Pro, naqshadaynta casriga ah iyo waxqabadkeeda gudaha ee qiimaha jaban. In kasta oo uu ka horreeyay waa Realme 3, shirkadda waxay go’aansatay inay baabtiiso qaabkan 5, maxaa yeelay 4 waa tirada nasiib xumo ee Shiinaha.
Naqshad aad u lamid ah
Xaqiiqdii, labada moodalba aad ayey iskugu egyihiin qaabkooda. Qurxinta jirka waxay leedahay qaabab polygon ah taasi waxay ka fogeysaa moodello dhaqameed badan. Gudaha waxaan ku aragnaa afargeeslaha xagal gadaal ah iyo akhristaha faraha.
Dhanka shaashadaada, Realme 5 waa 6.3 inji 6.5 ee Realme 5 Pro, IPS / LCD labadaba. Waxa kale oo jira kala duwanaansho xagga xallinta: HD + (1,600 x 720 pixels) oo loogu talagalay Realme 5 iyo FullHD + (1,080 x 2,340 pixels) marka loo eego nooca nooca Pro.
Dhanka kale, haddii Realme ay waxoogaa cusub ka abuurtay qaabeynta gadaasha, dhinaca hore waxay rabeen inay jiidaan dareenka caadiga ah, taas oo kiiskan ku fadhida meel aad u yar oo ah qaybta sare ee mobilada.
Nidaamka kamaradaha gadaal gadaal
Tiirka ugu weyn ee Realme cusub wuxuu ku yaalaa kaamirooyinkiisa gadaal. Sidii aannu nidhi, kuwani waxay ka kooban yihiin nidaam afar ujeeddooyin ah, in kastoo ay kaladuwanaadaan muraayadaha ugu muhiimsan ee Realme 5 (12MP) iyo kan Realme 5 Pro (Sony IMX596 ee 48MP).
12MP dareeraha ugu weyn ee leh f / 1.8 aperture iyo 5P lenses
8MP xagal ballaaran (119º) oo leh f / 2.25 iyo 5P muraayadaha
48MP dareemayaasha ugu weyn ee leh f / 1.79 aperture iyo lePee lenses 6P
Kaamirooyinka dambe ee Realme 5 Pro waa kuwa ugu awooda badan suuqa, iyadoo leh heer faahfaahsan oo aan rajeyneynay inaan isku dayno sida ugu dhaqsaha badan. Kaameeraha hore ayaa waliba ku guuleysta nooca ugu qaalisan ee leh 16MP, by 13MP of the standard model.
Xusuusta iyo keydinta dhammaan dhagaystayaasha
Labada Realme 5 iyo 5 Pro waxay leeyihiin dhowr nooc oo labadaba RAM iyo ROM ah, sidaa darteed isticmaaleygu wuxuu leeyahay ikhtiyaar aad u fudud oo kuxiran wuxuu doonayo. Maxaad u raadineysaa xusuus gaar ah iyo keydin? Way adag tahay in laga helo Realme cusub. Aynu u kala baxno qaybo. Realme 5 ayaa leh a 3GB Ram iyo 4GB RAM, halka barnaamijka Pro ee sheegashada ayaa kordhay, iyo sidoo kale xulashooyinka (4GB, 6GB iyo 8GB).
Markay tahay kaydinta, waxaad ka dooran kartaa Realme 5 ka mid ah 32, 64 ama 128GB, oo lagu fidin karo 256GB oo leh microSD. Hadaad doorato Realme 5 Pro, 32GB ikhtiyaar ayaa la waayayaa.
Waxa kale oo jira kala duwanaansho la saadaalin karo oo ku jirta processor-ka. Laga soo bilaabo Snapdragon 665 ee Realme 5 waxaan aadnaa Snapdragon 712 ee Realme 5 Pro. Dabcan, labada xaaladoodba waxaan hubin karnaa in aaladda si buuxda ugu shaqeyn doonto. Nidaamka hawlgalka wuxuu noqon doonaa Android 9 Pie oo leh interfaceOS 6 Realme Edition interface ah.
Qeybaha intiisa kale waxaan ku iftiimin karnaa batteriga weyn ee nooca heerka, gaadhaya 5,000 mAh, by 4,035 mAh ee nooca Pro. Dambe wuxuu qaataa aargudasho gaar ah isagoo leh xukun deg deg ah (VOOC of 20W 10W ee Realme 5). Ugu dambeyntii, marka la eego isku xirnaanshaha, farqiga weyn ayaa ku jira dekada USB, microUSB on the Realme 5 iyo USB-C on the Realme 5 Pro.
Realme 5 wuxuu ka iibin doonaa gudaha Hindiya 27ka Agoosto midabada Crystal Blue iyo Crystal Purple, halka Pro uu sidoo kale bilaabi doono qeybinta Hindiya, kaliya bisha Sebtember 4 iyo labo midabo kala duwan, Sparking Blue iyo Crystal Green Weli waa Lama yaqaan goorta ay u boodaan qaaradaha kale. Qiimaha labadooduba way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay noocyada mobilada kasta:
3 GB / 32 GB waayo, 9,999 rupees, qiyaastii 126 euro oo la beddelo
4 GB / 64 GB ee 10,999 rupees, qiyaastii 138 euro si loo beddelo
4 GB / 128 GB oo ah 11,999 rupees, qiyaastii 150 euro oo la beddelo
4 GB / 64 GB ee 13,999 rupees, qiyaastii 176 euro si loo beddelo
6 GB / 64 GB ee 14,999 rupees, qiyaastii 189 euro oo la beddelo
8 GB / 128 GB waayo, 16,999 rupees, qiyaastii 214 euro oo la beddelo
Runtii 5Realme 5 Pro
Cabirrada iyo culeyska – 157 x 74.2 x 8.9 mm iyo 184 garaam
shaashadda 6.3 inji, HD + qaraar (1,600 x 720 pixels) iyo Gorilla Glass 5 6.5 inji, FullHD + qaraar (2,340 x 1,080 pixels) iyo Gorilla Glass 5
Qalabka gadaal gadaal 12 MP, 8 MP, xagal ballaadhan f / 2.25, 2 MP macro f / 2.4 iyo 2 MP sawir f / 2.4 48 MP f / 1.79, 8 MP xagal ballaadhan f / 2.25, 2 MP macro f / 2.4 iyo 2 MP sawir f / 2.4
Kaameerada hore 13 MP 16 MP leh muraayadaha f / 2.0
Processor Qualcomm Snapdragon 665 ee 2 GHz iyo Adreno 610 GPU Qualcomm Snapdragon 712 at 2.3 GHz iyo Adreno 616 GPU
OS Android 9 Pie iyo ColorOS 6.0 Android 9 Pie, ColorOS 6.0 iyo Hyperboost 2.0
Isku xirnaanta Dual 4G / Dual Standby, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, nooca USB C, 3.5mm jaakadaha iyo raadiyaha FM Dual 4G / Dual Standby, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, nooca USB C, 3.5mm jaakadaha iyo raadiyaha FM
Xusuusta RAM: 3 ama 4 GB
Kaydinta gudaha: 32, 64 ama 128 GB (fidin kara illaa 256 GB oo leh microSD) / xarunta>
RAM: 4, 6 ama 8 GB
Xusuusta gudaha: 32, 64 ama 128 GB (fidsan illaa 256 GB oo leh microSD)
Durbaan 5,000 mAh oo si xawli ah u dallacaya VOOC 3.0 4,035 mAh oo si xawli ah ku dallacaysa VOOC 3.0
Aayadaha 3 GB / 32 GB
MicroSD illaa 256GB
Qiimaha 3 GB / 32 GB oo ah 9,999 rupees, qiyaastii 126 euro oo la beddelo
4 GB / 64 GB oo ah 10,999 rupees, qiyaastii 138 euro oo la beddelo
4 GB / 64 GB oo ah Rs 13,999, qiyaastii 176 euro oo la beddelo
6 GB / 64 GB oo ah 14,999 rupees, qiyaastii 189 euro oo la beddelo
8 GB / 128 GB oo ah 16,999 rupees, qiyaastii 214 euro si loo beddelo